Bụ Droplr Ngwá Ọrụ Kachasị Mma Kachasị Mma Dị? | Martech Zone
Fraịdee, June 8, 2018 Satọde, 9 Juun 2018 Douglas Karr
Igbe, Dropbox, Google Drive… nwere ọtụtụ ndị ahịa niile na-eji ihe ntanetị dị iche iche, nchekwa ndị ahịa m bụ ọdachi. Otu ugboro n’izu ma ọ bụ karịa, m na-akwaga data nke ndị ahịa m niile na netwọọdụ ntanetị mara mma nke akwadoro nke akwadoro. Tobọchị ruo ụbọchị, n'agbanyeghị, ọ bụ ọdachi na-anwa ịchọta na zipu faịlụ… ruo ugbu a.
Onye ọrụ ibe anyị na-eji Droplr. Enwere m obi ike ịnweta ngwa ọrụ faịlụ ọzọ, ereghị m na mbụ. Agbanyeghị, ka oge na-aga, ahụrụ m ịdị mfe nke ikpo okwu ha n'anya. Ọ bụrụ na m chọrọ ịkekọrịta faịlụ, naanị m ịdọrọ ya na ogwe ngwaọrụ m ebe etinyere ya ma nyekwa njikọ. M nwere ike izipu na njikọ m ahịa na ọganihu and ha nwetara faịlụ. Enweghị windo mmeghe, ịchọta folda, na-emekọrịta… naanị bulite ma zipụ. Ọ na-enwu gbaa na ịdị mfe ya.
Droplr Njikwa faili maka Mac njem
Droplr Njikwa faili maka Windows Tour:
Atụmatụ Droplr Pro gụnyere:
Detuo ma kọwaa screenshots - gụnyere weebụsaịtị na ọtụtụ faịlụ.
Dekọọ ihuenyo iji nye foto zuru ezu
Jiri njikọ dị ike - gụnyere Gmail, Google Docs, Trello, Slack, Photoshop, Intercom, Sketch, Atlassian Confluence, Atlassian HipChat, Atlassian Jira, Microsoft Teams, Apple Messages, Discord, na Skype.
Mee ngwa ngwa ọbụna nnukwu faịlụ
White labeelu faịlụ ị na-eziga
Pịa n'ime njirimara ọrụ otu
Debe onwe-nbibi na faịlụ ma ọ bụ chekwaa ha mgbe ebighi ebi
Kpido faịlụ ị na-echekwa
Chedo faịlụ gị na paswọọdụ
Mepụta na kesaa mbadamba niile na ọdịnaya
Hụ mmekọrịta onye ọrụ yana faịlụ dị na Drop Analytics
Tọọ omenala subdomain ma ọ bụ ngalaba
Nwere ike debanye aha maka Droplr n'efu, ma ọ bụ gaa pro maka obere ego otu ọnwa (akwadoro nke ọma). Droplr ọ bụghị naanị na-enye gị ohere ịkekọrịta faịlụ n'otu ntabi, ị nwekwara ike ịkekọrịta ọdịnaya ihuenyo site na desktọọpụ gị. Nke a ga - enyere gị aka mee ka ọrụ gị dị ngwa ma mee ka ọ dị mma n'oge gị.
Banye maka Droplr
Mara: Ana m eji njikọta mgbakwunye m na post a!
Tags: Ozi AppleNjikọ AtlasAtlas nke HipChatUchechukwu JiraNsogbuNdubuisiịkekọrịta faịlụGmailgoogle docsájáNgalaba MicrosoftPhotoshopEkeskypeslackTrello